DAAWO VIDEO: Mas’uul 30-kun oo Dollar ku qaatay Dhibaateeynta Dad shacab ah & Warkii ugu Cuslaa ! – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO: Mas’uul 30-kun oo Dollar ku qaatay Dhibaateeynta Dad shacab ah & Warkii ugu Cuslaa !
October 1, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Maanta 0
Guryo deegaan ahaa mudo ka badan 40 sano lehna Ducuments sax oo la bixiyay ka hor burburkii Dowladi dhexe ee Dalka ayaa si bareer ah loo dumiyay,waxaana sidoo kale si ka baxsan Bini’aadannimada loola dhaqmay Haween Waayeel ah iyo Odayaal Da’a kuwaasi oo loo adeegsaday rasaas nool nool sida ay inoo sheegeen.
Maamulka Degmada Yaaqshiid ayaa Dhulka dhigay ku dhawaad 10-guri oo ku yaala Xaafada Toowfiiq ee Degmadaasi Ciidamada ammaanka ayaana waxyeelo gaarsiiyay qaar ka mid ah Shacabkii lahaa Guryahaasi oo ka dhiidhiyay Dulmigaasi lagula kacay.
Lacag aad u fara badan ayeey sheegeen in lagu bixiyay Barakicintooda,waxaan awood u sheegtay Gudoomiyaha Degmada Yaaqshiid Muuse Geeseey Jimcaale, iyagoo ka hadlay tacadiga bareerka ah ee loo geeystay waxaana ay Madaxda Sare ka Dalbadeen Cadaalad.
Maamulka Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu mar walba awood u sheegtaa dadka shacabka ah,mana ahan markii ugu horeeysay oo sidaan oo kale loo dumiyay guryo dad shacab ah ay lahaayeen,iyadoo lasoo sheegay in ay mar walba qaataan lacag aad u xoogan